झस्केको नेपाली कांग्रेस पार्टी – Chitwan Post
जीवितमध्येको सबैभन्दा पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई यसपटक अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गज्जबले झस्काइदियो । राणाशासन उखेल्न मरिमेटेर लाग्दा लाग्दा राणाहरुको संगत पर्दा अलिकति राणाको गुण र पछिल्लोपटक पञ्चायती व्यवस्था फाल्न शाह राजा र तिनका राजनीतिक कामदार पञ्चहरुको संगत पर्दा तिनको समेत गुण देखिने नेपाली कांग्रेस पार्टीले सबै खाले गुण र चरित्र बोकेर बसेको छ । यहाँसम्म कि नेपाली कांग्रेसमा कुनै बेला आफूलाई एमाले बताउने र खाँटी माओवादी दाबी गर्नेहरुको गुण पनि यिनमा धेरथोर देखिन्छ । एमाले भन्नेहरुसँग सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भएर बस्दा, मीठो–मसिनो खाँदा होस्, खस्रो–नमीठो खाँदा होस्, सँगसँगै बस्दा एमालेको गुणदोष पनि नेपाली कांग्रेसमा सरेकै हो । एकबारको जुनीमा बन्दुकबाट नै शक्तिको जन्म हुन्छ र जन्मिएको शक्ति पनि बन्दुकले नै जोगाउँछ भन्ने लागेर जंगल पसेका माओवादीहरुसँग पनि परमनिकटको छिमेकी देश भारतको राजधानी दिल्लीमा बसेर १२ बुँदे शीर्षकमा ल्याप्चे ठोकेपछि काठमाडौँलगायत देशका सबैजसो सडकमा माओवादी र कांग्रेस अँगालो हालेर राजा ज्ञानेन्द्रको एकलौटी शासनविरूद्ध धाबा बोल्दा त्यतिबेलै कांग्रेसमा माओवादी गुण मिसिएकै हो ।
अब संगतकै कारण धेरैको गुण सर्दा नेपाली कांग्रेस शुद्ध कांग्रेस नरहेर यताउताको गुण र विशेषता सर्न जाँदा यो विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला ताकाको कांग्रेस रहेन । झन्डाचाहिँ उही पुरानै चारतारे छ । नयाँ तर्क नदिई “विपी बाबु यसो भन्नुहुन्थ्यो, उसो भन्नुहुन्थ्यो भन्ने र मुखले प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्न नछाड्ने यिनलाई संगठन विस्तार गर्न जरूरी पनि पर्दैन । आजसम्मको अवस्थालाई हेर्दा यस्तो देखिन्छ कि कांग्रेस कहिल्यै नमोटाउने र कहिल्यै नदुब्लाउने खालको छ । नेपाली कांग्रेस आफू लोकतान्त्रिक भएको हँुदा र यतिबेलाको विश्व लोकतन्त्रमय भएको हुँदा यिनले आफूलाई कम्युनिस्टहरुले हराउन नसक्ने ठानिरहेका छन् । यही कारण हो, नेपाली कांग्रेस आज पनि ढुक्कले घरझगडामा रूमल्लिएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा एउटा ठूलो गुँड बनाएर बसेका छन् । हुन त, यिनले खतरनाक राजनीतिज्ञ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको तानाशाहीविरूद्ध निकै कडा संघर्ष गर्नु परेको थियो । यहाँसम्म कि गिरिजाप्रसादको तानाशाहीविरूद्ध यिनले नेपाली कांग्रेस पार्टी नै फुटाएर नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरेका थिए । पार्टीको पछाडि “प्रजातान्त्रिक” फुर्को गाँस्नुको अर्थ अरु नभएर गिरिजाप्रसाद तानाशाही छन्, आफूहरु चाहिँ प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई स्वीकार्ने खालका हौँ भन्ने संकेत थियो ।
आँटका हिसाबले उतिबेला शेरबहादुरलाई आँटिला नेता पनि भनिएको हो, किनभने नेपाली कांग्रेसको जन्म र विकासमा कोइराला खलकको रगत–पसिना मिसिएको हुँदा प्रभाव र आदेश तिनैको चल्नु स्वाभाविक थियो । कोइरालाहरुको विरूद्ध बोल्नु र संगठित हुनुको अर्थ राजनीति धरापमा पर्नु हो भन्ने सबैले बुझ्थे । प्रमाणका लागि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विरूद्धमा लागेको र बोलेको प्रमाण पाउनासाथ गोर्खाका खुर्सानी माइलो अर्थात् चिरञ्जीवी वाग्ले आर्थिक भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल पुगिहाले । अहिले उनको राजनीति पनि सुकेर ढुसी परेको खुर्सानीजस्तै हुनपुग्यो । जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता कोइरालाको चाकडी गरून्जेल तिनको भुइँमा खुट्टो थिएन । कोइरालाको बुई चढेरै तिनी सञ्चारमन्त्रीसमेत भए, तर जब तिनले कोइरालाहरु “केही होइनन्” भन्न लागे तिनको पनि दिन सकियो । भ्रष्टाचार लाग्यो र तिनी अहिले नेपालभित्रै कतै छन्, तर राजनीतिक गतिविधिबाट ओझेलजस्तै परे ।
नेपाली कांग्रेसभित्र प्रिय र बाहिर चर्चित नेता थिए, खुमबहादुर खड्का । एकबारको जुनीमा तिनले पनि कोइरालासँग निहुँ खोजे । निहुँ नखोजी “हस् हजुर जय नेपाल, हुन्छ हजुर जय नेपाल” भनेका भए सायद आज पनि खुमबहादुर नेपाली राजनीतिमा जमेरै बस्थे होलान् । तिनलाई पनि जेलभित्र छिर्न प¥यो । तिनी त यस्तो चेपुवामा परे कि जुनीभरि चुनाव लड्न नपाउने बनाइयो । पीरले रोग लाग्यो भन्नुभन्दा रोग लागेर पिरिए भन्न ठीक हुन्छ । खुमबहादुरलाई मिर्गौलासम्बन्धी रोग लाग्यो । त्यही निहुँमा उनी बिते । भक्तपुरका बाजे जगन्नाथ आचार्य पनि कोइरालासँग निहुँ खोज्दा राजनीतिक वृत्तबाट उछिट्टिएका थिए । तर, अचम्म मान्नुपर्छ शेरबहादुरलाई तत्कालीन खतरनाक राजनीतिज्ञ गिरिजाप्रसादले न्वारानदेखिको बल लगाएर पाखा लगाउन खोज्दासमेत सकेनन् । पछि नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकबीच एकीकरण भएपछि पनि गिरिजाप्रसादले शेरबहादुरलाई पछार्न कोसिस त गरेकै थिए तर शेरबहादुरको भाग्य नै बलियो भन्नुपर्छ, गिरिजाले शेरबहादुरको राजनीति समाप्त पार्नुअघि नै गिरिजाप्रसाद पखाला लागेर बिते । अब कसो कसो भारतीय जोगीहरुको साथ र दाम खुमबहादुरलाई र खुमबहादुरको साथ शेरबहादुरलाईवाला अबस्था सिर्जना हुँदा रामचन्द्रलाई पार्टी सभापतिमा हराउन सफल शेरबहादुर नेपाली कांग्रेसको सभापति भइहाले । खप्परमै लेखेर ल्याएपछि कसको के लाग्छ ! यतातिर खुर्सानी माइलो, जयप्रकाशप्रसाद, खुमबहादुर र जगन्नाथहरुको राजनीतिक यात्रामा पूर्णविराम लाग्दा उता शेरबहादुर देउवाचाहिँ नेपाली कांग्रेसजस्तो विशाल र पुरानो इतिहास बोकेको पार्टीको सभापति नै भए । यसैलाई भन्छन् दैवको लीला ।
हुन पनि हो, गिरिजाप्रसादभन्दा शेरबहादुर ज्यादै लोकतान्त्रिक र उदार छन् । होइन भने, सभापतिको पावर प्रयोग गर्न पाउँदा यिनले पनि कसैलाई नटेरेको भए हुन्थ्यो र सक्थे पनि । पार्टीमा यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भन्दै हिजोआज पनि रामचन्द्र र कृष्ण सिटौलाहरु गनगन गर्दा गिरिजा भएको भए के हुन्थ्यो हुन्थ्यो, शेरबहादुरले चाहिँ लौ लौ मिलेर जान तयार छु भने । अहिले साथीहरुलाई शेरबहादुरले मिलाएरै लाने सोच बनाएको देखिन्छ । यसरी लचकता प्रदर्शन गरेका शेरबहादुर नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसमा धेरैपटक मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री भएका विजय गच्छदारलाई यसपटक अख्तियारले डाम्यो, अर्थात् भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दर्ता ग¥यो ।
नेपाली कांग्रेसलाई थाहा छ, विजय गच्छदार गाईको दूधले नुहाएर शुद्ध भएका व्यक्ति होइनन्, अर्थात् धेरै नभए सुका–मोहर भए पनि यिनले भ्रष्टाचार त गरेकै छन् । तैपनि, नेपाली कांग्रेसले अख्तियारलाई “हाम्रो मान्छे”लाई किन मुद्दा लगाइस् भन्ने आशयले तीन दिन संसद् अवरूद्ध ग¥यो र आफ्ना भाइबहिनीलाई सडकमा विरोधका लागि उता¥यो । यहाँनेर नेपाली कांग्रेस चुक्यो । विजय गच्छदार आर्थिक भ्रष्टाचारी हुन् वा होइनन्, छानबिन हुने हो । मुद्दा दर्ता भएको हो, फैसला भएको होइन । अब नेपाली कांग्रेसलाई के लाग्यो भने हाम्रो भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ अख्तियारले डाम्ने तर अरुको भ्रष्टाचारीलाई किन नडाम्ने ? आशय कांग्रेसको यही हो । सडक आन्दोलनका बखत प्रस्ट आवाजमा भनिएको हो कि फलानो पार्टीको फलानो भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ किन मुद्दा दर्ता गरिएन ? कहिलेकाहीँ कांग्रेसजस्तो जिम्मेवार र परिपक्व पार्टी पनि मुद्दा बोक्ने सवालमा झुक्किन्छ । नेपाली कांग्रेसले भन्न सक्नुपर्छ कि “आर्थिक भ्रष्टाचारी जोसुकै होस्, कानुनी कारबाही हुनुपर्छ ।” तर, यसोचाहिँ भन्न कहिल्यै छाड्न हुन्न कि पूर्वाग्रह राखेर कानुनको डण्डा उचाल्ने र ताक्ने काम कहिल्यै कसैले कोहीमाथि गर्न हुन्न ।
अहिले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, तर व्यवस्था साम्यवादी होइन । व्यवस्था लोकतान्त्रिक हो, गणतान्त्रिक व्यवस्था हो । यो देशमा सम्मानित अदालत छ, अदालतले न्याय दिन्छ । जानेर वा नजानेर कसैले पूर्वाग्रह राख्न सक्ला, तर आज पनि नेपालमा न्याय मरेको छैन । फेरि नेपाली कांग्रेसले यो पनि बुझ्न जरूरी छ कि यसपटक अख्तियारले कहीँकतै सामान्य भूलचुक गरेकै भए पनि सामान्यभन्दा माथिकै माछा भनौँ वा भ्रष्टाचारीलाई पाता फर्काउने कोसिस गरेको छ । आफ्नै भूतपूर्व हाकिमलाई मुद्दा लगाउनुलाई सानो आँट र हिम्मत भन्न सकिन्न । मान्छे वा मान्छेको समूह भनेको एकबारको जुनीमा कहिलेकाहीँ कमजोरी देखाउने र गल्ती गर्ने प्राणी त हो नै । राजाको शाही आयोग खारेज गर्ने आँट भएका माननीय न्यायाधीशहरु भएको देश हो नेपाल । विजय गच्छदारलाई मुद्दा लाग्दैमा अहिल्यै डाँको छाडेर रून पर्दैन, न त जुलुस र नाराबाजी नै गर्नुपर्छ । विवेकका धनी न्यायाधीश छन् भन्ने जान्दाजान्दै किन तर्सिनु ? प्रयास तर्साउने हुन सक्छ, तर तर्सिन पर्दैन । शेरबहादुरजी, सम्मानित अदालतले गच्छदारलाई दोषी ठहर गरे स्याउ–सुन्तला बोकेर जेलमा भेट्न जानू, होइन निर्दोष सावित भए न्याय र कानुन भएको र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवाला देशमा यस्तै हुन्छ भन्ने बुझेर आफ्नो काममा लाग्नू ।